महिला खुला सदस्यमा डिला संग्रौलालाई सर्वाधिक मत, कसले कति पाए ? - समाचार - कान्तिपुर समाचार
महिला खुला सदस्यमा डिला संग्रौलालाई सर्वाधिक मत, कसले कति पाए ?
काठमाडौँ — कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत महिला खुला केन्द्रीय सदस्यको मतगणना सकिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार महिलातर्फ खुला केन्द्रीय सदस्यमा डिला संग्रौलाले सर्वाधिक मतसहित जितेकी छन् । उनले दुई हजार ८८५ मत पाएकी छिन् ।
त्यस्तै, पुष्पा भुसालले दुई हजार ७१८, आरजु राणाले दुई हजार ५३६, अम्बिका बस्नेतले दुई हजार ३३९, इश्वरी न्यौपानेले दुई हजार २५९, सरिता प्रसाईंले दुई हजार ९६, रमा कोइराला पौडेलले एक हजार ८५८, सुशीला ढकाल आचार्यले एक हजार ८०४ र रंगमती शाहीले एक हजार ७८९ मतसहित विजयी भएका छन् ।
निर्वाचितमध्ये प्रसाईंबाहेक सबै शेरबहादुर देउवा समूहका हुन् । प्रसाई भने शेखर कोइराला समूहकी उम्मेदवार हुन् ।
निर्वाचितमध्ये संग्रौला, भुसाल, बस्नेत, न्यौपाने, प्रसाईं र कोइराला पौडेल यसअघि नै केन्द्रीय सदस्य थिए ।
ढकाल, राणा र शाही पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् । तेस्रो धेरै मतसहित निर्वाचित राणा सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी हुन् भने शाही हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् ।
९ पदका लागि ३० जनाले उम्मेदवारी दिएकामध्ये राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसकी सचेतक समेत रहेकी सांसद अनिता देवकोटासहित २१ जना पराजित भएका छन् ।
प्रकाशित : पुस ५, २०७८ २१:०२
कांग्रेस अल्पसंख्यकतर्फ प्रदीपकुमार सुनुवार केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित
काठमाडौँ — कांग्रेसको अल्पसंख्यकतर्फ प्रदीपकुमार सुनुवार केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत गत सोमबार भएको मतदानको जारी मतगणनाका क्रममा सोमबार सुनुवार निर्वाचित भएका हुन् । निर्वाचन समितिका अनुसार उनले सबैभन्दा धेरै २ हजार १७१ मत पाएर विजयी भएका हुन् ।
अल्पसंख्यकतर्फ एक पदका लागि पाँच जना प्रत्यासी थिए । कांग्रेस ओखलढुंगाका पूर्वसभापतिसमेत रहेका सुनुवार अन्य चार प्रत्यासीलाई भारी मतान्तरसहित पराजित गरेका हुन् ।
सोही पदमा टीकाराम सुब्बा लेप्चाले १०२३, ओमप्रकाश शर्माले ५३६, प्रेमबहादुर छन्त्यालले २०६ र हरिबहादुर घलेले ६०९ मत पाएका छन् ।
अल्पसंख्यक केन्द्रीय सदस्यका लागि ४ हजार ६३५ मत खसेको थियो, त्यसमध्ये ९० मत बदर भएको थियो ।
कांग्रेसले अहिलेसम्म १३ पदाधिकारीसहित ३५ खुला सदस्यको गणना गरिसकेको छ । सोमबार खुला महिला सदस्यको पनि मतगणना भइरहेको छ ।
प्रकाशित : पुस ५, २०७८ २०:५२